8 Jadwalka Week
Sida loo diyaariyo DAT ah
#1 - Ula dhaqan aad diyaarinta sida shaqo waqti-buuxa ah
#2 - Falanqeeyaan oo aad baran
#3 - Ha naftaada qarqin qalab aad u badan udiyaarin
#4 - Soo qaado qalabka waxbarasho xaq u
#5 - Ha is la nuugo galay oo kaliya waxbarasho hal mawduuc waqti
#6 - Ma badan oo dhaqanka su'aalo iyo imtixaanada / yaryar!
#7 - caafimaad! Ha u ogolaan jirkaaga qudhmi iska halka aad wax ka barato, waayo DAT ah
DAT Plan Study
8 Week Schedule Study
Waxaan ka caajisay baranaya DAT ah, sababtoo ah waxaan ahaa sidaas naxdin iyo ma uu ogayn meel ay u bilaabaan. Anigu ma aan raaci mid ka mid ah qorshe waxbarasho oo aan soo ogaaday on forums online, maxaa yeelay, kulligood way wada baahan yahay qalab waxbarasho gaar ah oo aan ma lahayn iyo ma doonayaan in ay iibsadaan. Sidaas darteed, Waan ku soo dhamaaday abuuraya aan jadwal u gaar ah oo waxbarasho si ay isugu diyaariyaan DAT aan u malaynayaa in aad ka heli doontaa mid aad u faa'iido leh.
Ka dib markii ay marayaan galayeen, dugsiga ilkaha oo marayay Part NBDE ah 1 & Part 2 Guddiyada, Ayaan ka faa'iiday fikrad aad u fiican oo ku saabsan sida si wax ku ool ka baran. Hadafkeygu waa inaan ku siiyo jadwal waxbarasho guud iyo qaar ka mid ah talooyin qiimo leh oo kaa caawin doona inaad si fiican wax ka barato oo si fiican dhalin on Baaritaanka Admission Ilkaha.
Uma maleynayo, waa faa'iido u leh, wixiise aad qorshe faahfaahsan oo qalab gaar ah ee isku diyaarinaya DAT sababtoo ah qof kasta waa ka duwan yahay in sida ay doonayaan in ay bartaan iyo waxa ay hore u tiqiin. Qaar ka mid ah waxaad tihiin badnayn oo chemistry, halka qaar kalena ay sidayda oo kale, ma aha. Qof kasta oo ka yimaada asalka ah oo kala duwan iyo waa meel kala duwan ee waxbarashada. Sidaas daraaddeed waxaan halkii isugu lahaa jadwal waxbarasho guud in qof kasta wuxuu qaadan karaa, waxna ka beddeli sida ay baahidooda.
Waxaan doortay jadwalka 8-todobaad ah waxbarasho, sababtoo ah waxaan qabaa, inay tahay waqti ku filan ee ardayga pre-ilkaha celceliska inay si fiican u barato iyo dhaliyo tartan on DAT ah. Haddii aad leedahay asal sayniska xoog ah ama mid daciif ah ka dibna waxaan ku talin lahaa mid hoos u sii kordhaya ama dhererka jadwalka, laakiinse waxaan ka sii jeclaan lahaa in ka yar 12 todobaad max oo ugu yaraan ah 4 todobaad
Waxaan u Flogaamiyey Wajigayga aqoonsan lahaa sida arday celcelis ahaan pre-ilkaha sidii aan ku qaatay 10 todobaad diyaarinaya DAT ah. Si kastaba ha ahaatee, Haddii aan ogaan lahaa macluumaadka aan ku saabsan si ay u sharxaan in ahay, Waxaan qaatay lahaa oo kaliya 8 toddobaad ama ka yar ee diyaarinta DAT ah.
Waxaan helay Bachelor of Science ee ku degree Biology, taas oo u muuqata in ay noqon mid ka mid ah oo heerkoodu sareeyo pre-ilkaha more caadi ah undergrad. Waxaan dareemay raaxo badan la Biology, laakiin waxaan had iyo jeer ka badan la dagaallamay General Chemistry iyo Organic Chemistry. Sidaa darteed, waqti badan ayaan ku qaatay maaddooyinka kuwa oo waqti yar on Biology. Waa in aad la qabsado waxbarashada sida ay awoodaha iyo daciifnimo sida aan ku sameeyey.
Waxaan doonayaa inaan dulmar qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan in la tixgeliyo marka ay sameeysanayaan jadwalka waxbarasho si aad u abuuri kartaa jadwalka shakhsi u gaar ah in la kulmo baahida.
#1 – Ula dhaqan aad diyaarinta sida shaqo waqti-buuxa ah
Waxaan ku talineynaa gelinaya in ku dhawaad 40 saacadood ee barashada toddobaadkii, laakiin haddii aanad samayn karin xataa in badan ka dibna samee waxaad awooddo. Waxaa laga yaabaa inaad qabto maalmood halkaas oo aad ka dareento sida aad u baahan tahay waqti dheeraad ah si aad u qaataan 8+ saacadood maalintii iyo waxaa laga yaabaa in maalmood in aad ku qaataan wax ka yar 8 saacadood. Si kastaba ha ahaatee, ma qaado nasasho-maalin multi inta lagu guda jiro dhexe ee waxbarashada. Waxaad iilataan doonaa in ka badan aad u malaynayso oo ku adkaan doonto inay ku soo laabtaan jeexdin waxbarasho ka heli mar kale. Waxaan u lahaa xaaladaha degdegga ah qoys intii aan toddobaadkii saddexaad ee waxbarashada iyo lahaa in todobaadkii qaadan off. Marka aan waxbarashada ku soo laabtay waxaan dareemay sidii aan bilaabay mar kale.
#2 – Falanqeeyaan oo aad baran
Dheellitir aad waxbarashada iyo dhererka aad waxbaranayso ku salaysan off ka mid ah kuwan. Dufanka wax in aad si fiican u yaqaanna iyo barato wax aadan aqoon. Haddii aad qabtid soo jeeda sayniska aad u tabar daran markaas dheerayn jadwalka si 8+ todobaad oo waqti dheeraad ah ku qaataan barashada cilmiga ah. Haddii aad tahay qof itaal Biology markaas waqti dheeraad ah oo ku saabsan Biology iyo waqti yar ku bixiyaan meelaha in aad xoog ku tahay.
#3 – Ha naftaada qarqin qalab aad u badan udiyaarin
Waxaan arkay arday badan pre-ilkaha, iyo sidoo kale ardayda ilkaha, isku dayaan in ay u diyaar garoobaan imtixaanada DAT ama guddiga wax kasta oo suurto gal ah udiyaarin suuqa. Waxaad ku fidin doonaa naftaada khafiif ah by waxan u samaynaysaan iyo oofin iyo sidoo kale aad kari waayeen. waxaa Hayso fudud oo isku day in aad ku dhegi saddex ama khayraadka waxbarasho ka yar ku haboon baahidaada.
#4 – Soo qaado qalabka waxbarasho xaq u
Baro khayraadka kasta suuqa iyo soo qaado kuwa la kulmi doonaa baahida iyo qaabka waxbarashada. Riix halkan si aad akhriyi dib u eegista ah ee kala duwan ee aan koorsooyinka dib u eegis DAT.
#5 – Ha is la nuugo galay oo kaliya waxbarasho hal mawduuc waqti
Waxaan arkay aniga oo doonaya in ay kaliya diirada saarnaa mid ku xiran ka dibna u guurto on in ay ka mid kale ka dib markii aan dhammeeyey. Markii aan qaaday imtixaan on maadooyin aanan mar dambe ka barta ahaa, Dhibcaha aan hoos waqti weyn. Aad u baahan tahay inaad xajiya waxyaalaha cusub oo wax ka baran noocyo kala duwan oo mawduucyo maalin kasta.
#6 – Ma badan oo dhaqanka su'aalo iyo imtixaanada / yaryar!
Tani waa muhiim si ay ugu guulaystaan ​​iyo sidoo kale gool. Waa in aad la samaynayso su'aalo dhaqanka maalin kasta. Waxaad baran doontaa ugu badan ee waxbarashada adigoo samaynaya su'aalo dhaqanka! Your dhibcaha imtixaanka dhaqanka ma aha waxa ugu muhiimsan. Waa dhan ah oo ku saabsan waxa aad ka su'aalaha aad ka qaldan helay bartaan imtixaanada dhaqanka. Dhibcaha waa muhiim oo kaliya marka aad dhab ahaan u qaadan DAT ah. su'aal kasta oo aad ka heli qalad waa in aad ogaado sababta aad u helay waxa qaldan iyo waxa ka bartaan. Ka dib marka aad qaadato imtixaanka, fiira gaar ah goobaha in aad ku dhibtooday in iyo iyaga dheeraad ah ka barato. Fiiri macluumaadka, aad qaadi karto qoraal, oo waxaad ka samaysaa deegaanka in daciif ah mid ka mid ah awoodaha aad.
#7 – caafimaad! Ha u ogolaan jirkaaga qudhmi iska halka aad wax ka barato, waayo DAT ah
Fir, jimicsiga, ahaan bulshada, cuno caafimaad leh, oo aad hesho hurdo ku filan. Ma aha in aad si ay allabari ah noloshaada ama saaray qabtay. Maskaxdaadu waxay u baahan tahay in ay nastaan ​​iyo sidoo kale jirka si ay isticmaalaan habeenkii iyo maalmaha fasaxa si aad u nasato iyo jir ahaan nasan. Waxaad dhalin doono inta ka sareeya on DAT haddii aad tahay jidh ahaan caafimaad qaba.
Hadda, kormar jadwal waxbarasho guud oo aad ka beddeli kartaa sida ay baahidaada shakhsi ahaaneed. Ujeedada this waa inay ku siiyaan template ah in aad qaadi karto oo aad adiga kuu gaar ah.
Waxaan ku qoran maadooyinka inaad wax ka barato sida ay lacagta iyo dhib mid ah waxyaabaha la on maado kasta. Maado kasta waxaan ku qoran jadwalka, waa in aad bilowdo iyadoo mid ka mid qaybta ka yar maadadaas iyo shaqeeyaan mid kasta ilaa aad ku dhammeeyo (i.e., Chemistry Guud – Acids iyo Saldhigyada). Marka aad buuxiso maaddo, tago ma dhex mar kale iyo xoogga saaraan qaybaha in aad tahay itaal.
Hubi in waxaan ka dhigi lahaa in aad ku samaysay guudmar dhamaystiran mid ah waxyaabaha la on DAT oo dhan by dhamaadka isbuucaan lix. Waxaan ku qarash gareen doonto laba toddobaad ee la soo dhaafay diiradda on qaadata imtixaanada dhaqanka iyo samaynaya su'aalaha dhaqanka iyo dib wax aad weli waa ay yar yihiin in. waxaan jeclaan lahaa qaadan ugu yaraan saddex imtixaan oo dhererkiisu buuxa ka hor inta aysan DAT ah; ayaa in ka badan si fiican u! Waxaan ka dhigay jadwalka this inay meel lix imtixaan dhererka buuxa. Kaplan iyo Standard Gold The waxay leeyihiin imtixaan ugu leh 5, si jadwalka tani waxay u oggolaanaysaa waqti ku filan oo dhan kuwa lagu daray kuwa kale kasta oo aad ka heli kartaa waxtar leh.
Waa in aad la samaynayso dhaqanka su'aalo iyo yaryar oo dhan waxbarashada in kastoo. Dhamaadka kasta block laba-saac waa in aad ku tirinnaa block in ay sameeyaan tababar su'aalo ku saabsan wax in aad soo baratay intii lagu block. Inta aad labada toddobaad ee ugu dambeeyay ee waxbarashada, waxaad bixisaan kartaa block oo dhan qabanayaan su'aalo dhaqanka maado kasta, ama qaybaha dib u eegis in aad tahay yaridu ay. kuwa su'aalaha dhaqanka Baro, hubi in aad u jawaabi kartaa iyo haddii aadan ka dibna dib u tegi kartaa oo waxay ku xisaabiso inta aadan ku.
The Imtixaanka Awoodda garasho, Reading fahamka Test, oo Sabab u tiro ahaaneed (QR) Imtixaanka ma aha sida cufan sida cilmiga ah oo sidaas daraaddeed ma u baahan tahay diyaarinta sida ugu badan. Inkastoo baaritaan kuwaas oo aan u baahnayn sida ugu badan ee waxbarashada sida cilmiga ah waxaa lagama maarmaan ah in ay khibrad u leh noocyada su'aalaha. Waxaa kaloo muhiim ah in ay bartaan Talooyin iyo tabaha hawl si fiican u imtixaanadaas oo aan kala hadli in posts kale.
The Imtixaanka Awoodda garasho u baahan tahay wax badan oo ka mid ah dhaqanka iyo waayo-aragnimo u samayn noocaan ah dhibaatooyinka. Waqti ay qabanayaan masalooyinka dhaqanka iyo waxaad ka heli doontaa ka hang waxaa ka mid ah. Fahamka Imtixaanka Akhriska sidoo kale wuxuu u baahan yahay barbarta si ay u hoos ka heli maamulka waqtiga aad oo ay noqoto wax ku ool ah ee ka bixitaanka macluumaadka loo baahan yahay in ay ka jawaabaan su'aalaha. istiraatiijiyad wax ku ool ah oo qayb ka this aad bay u caawin inaad gaarto doonaa dhibco sare. Imtixaanka Sabab u tiro ahaaneed wuxuu u baahan doonaa qaar ka mid ah waxbarashada iyo dhibaatooyin farabadan dhaqanka sidoo kale si ay u caawiyaan aad u hesho score ah in aad gaarno imtixaanka this.
8-10 AM Biology Practice Test Biology Practice Test Review Light IN
10-12 PM gen Chem Practice Test gen Chem Practice Test Review Light IN
1-3 PM O Chem Review O Chem Review Is daji dabaal!
3-5 PM QR Review PAT Review Is daji dabaal!
Ka dib markii jadwalka aasaasiga ah tan waxbarasho, halkan waa burburka ka mid ah inta saacadood ee aad ku qaataan doonaa maado kasta:
Taasi aan jadwalka waxbarasho aasaasiga ah ee DAT ah. Waa inaad u shakhsiyeeyo iyo u isticmaal sida template ah si ay u caawiyaan aad si guul leh aad isugu diyaariso imtixaanka.
Waxaan ku talinaynaa lahaa qaadashada Axadaha off todobaad kasta, laakiin weli isku dayaan si ay u helaan dhowr saacadood ee barashada maalinta Sabtida haddii ay suuragal tahay. Haddii aadan rabin inaad wax ka barato maalinta Sabtida ka dibna ha u qaban. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan qorsheyn doono on faqri agagaarka 8 saacadood oo waxbarasho ah maalin kasta laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha. Waxaan qaadan lahaa saac oo fasax qado ah oo gaaban 5-10 daqiiqo nasashada ka dib markii kasta block laba-saac oo waxbarasho. Mar labaad, qabsato waqtiga aad ku bixisay barashada sida ay baahida iyo kartida aad leedahay.
Sida wax walba oo in kastoo, waxa aad rido waa waxa aad ka heli baxay waxaa ka mid ah. Waxaan rajeynayaa, tani waxay noqon doontaa faa'iido inaad sida aad isku diyaarineyso inay DAT ah! Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo gaar ah waxaan jeclaan lahaa inaan caawiyo, fadlan ka tago qaybta comments hoose. Sidoo kale, si xor ah u dar talo ama fikrado gaar ah oo ku saabsan waxbarashada loogu talagalay DAT in aad u malaynayso in laga yaabo in ay faa'iido u leedahay dadka kale!